Gbasara anyị - Ngwa igwe igwe
N'ime ọha ọgbara ọhụrụ, ejirila ụdị ngwaahịa dị iche iche rụọ ọrụ ebe niile n'ọhịa dị iche iche, dị ka ụgbọ ala, ụlọ ọrụ, na akụkọ ụlọ, wdg, agbanyeghị, mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ ga -ajụ m ihe bụ ngwaahịa ị na -eme ma ọ bụ ebe enwere m ike ịhụ ngwaahịa gị na ndụ anyị? N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, itinye ụgbọ ala abụghị ubi a na -amaghị. Anyị na -anya ụgbọ ala kwa ụbọchị, mana ihe anyị na -amaghị bụ na enwere puku kwuru puku ụgbọ ala nwere ike ime site na CNC Machining na mpempe akwụkwọ, dị ka okpokoro ụgbọ ala, akụkụ ahaziri iche yana ọbụna ịghasa. Nke ahụ bụ ihe anyị na -eme.
E guzobere Basile Machine Tool (Dalian) Co., Ltd. (BMT) na 2010 nwere ọhụụ doro anya: Ijere akụkụ CNC nkenke igwe ihe, igwe mpempe akwụkwọ na akụkụ stamping. Kemgbe ahụ, BMT anọwo na -arụpụta akụkụ ihe eji arụ ọrụ nke ọma maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, gụnyere ụgbọ ala, nhazi nri, ụlọ ọrụ, mmanụ ala, ume, ụgbọ elu, ikuku na ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nwere nnagide na oke nkenke. N'okpuru nduzi na nlekọta nke ndị ọkachamara Japan na Injin Injinia Italiantali, anyị nwere okwukwe enweghị njedebe n'inye ngwaahịa CNC Machined dị elu yana akụkụ mpempe akwụkwọ & akụkụ stamping.
BMT na-azụ ahịa maka otu ebumnuche iji dozie nsogbu nrụpụta ngwa ngwa ngwa ngwa! Ngwọta nrụpụta sitere na BMT bụ Akụkụ igwe CNC, yana akụkụ mpempe akwụkwọ & akụkụ stamping. Anyị ga -ejikọ ọnụ n'oké osimiri nke imewe, oge ndu na mgbanwe mmefu ego ma mee ka mkpebi mkpebi gị bụrụ nke ọma. Mana olee otu anyị ga -esi mee ya? Azịza ya dị mfe ~ ANYỊ na -elekọta.
N'ime afọ ndị gafeworonụ, BMT ghọrọ ọkachamara ọkachamara n'ịrụpụta nke ọma nwere ihe karịrị 40 nke CNC Machineries, dị ka CNC Lathes, CNC Machining Center, Machine Lathe, WEDM, Milling and Drilling Machine, Machine Cutting, Panasonic Welding Machine, wdg. .
Iji bie ndụ na -atụ anya ịrịgoro, BMT esorola otu ụlọ ọrụ Italytali rụkọọ ọrụ kemgbe 2016, na -emepụta ma na -azụlite Ngwaọrụ Ngwakọta Ngwa (Patent Model Patent No.: ZL 2019 2042 3661.3).
Site na ọrụ ọ bụla na -aga nke ọma, aha anyị na -eto, na -enyere anyị aka iji nwayọọ nwayọọ mụbaa ndị ahịa anyị na mpaghara yana site na ụlọ ọrụ.
Taa, enwere ike ịhụ akụkụ igwe BMT n'ofe ụwa niile, na -arụ ụdị ọrụ igwe maka ụfọdụ ụlọ ọrụ na -eduga ụwa, dị ka Toyota, BMW, Toshiba, Mori Seiki, wdg.
Kedu ihe kpatara mmekọ na BMT?
Kedu ihe BMT nwere ike ime? BMT dị maka iwepụ ihe mgbu gị.Anyị na -azụ ahịa ka anyị bụrụ ndị mmekọ gị n'oge ọ bụla nke mmepe ngwaahịa na imepụta omenala. Naanị ị kwesịrị ịtụkwasị anyị obi! Ọ dịịrị anyị mfe ịrụ ọrụ, na -azaghachi ngwa ngwa yana na -aga n'ihu na mmetụ anyị, anyị ga -eduzi ndị otu mmepe gị n'ọgba aghara ka ewepụta akụkụ gị dị mma ngwa ngwa na ọnụ ahịa kacha mma.
Kedu ihe kpatara ị ga -ejikọ BMT? N'ihi na ndị anyị na -eme mgbanwe. Anyị na -ejikọ teknụzụ kachasị ọhụrụ na ọrụ pụrụ iche sitere n'aka ndị ọkachamara nwere mmasị iji gboo mkpa gị dịka onye ọ bụla na -enweghị ike.
N'ịga n'ihu n'ịdị mma anyị gosipụtara, anyị na-atụ anya ịmalite mmekọrịta ogologo oge, mmekọrịta bara uru na ọtụtụ ndị ahịa nwere omume ọkachamara anyị, na-eduga nka na ọrụ dị mma. Anyị nwere obi ike na BMT ga-abụ nhọrọ gị kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ onye nrụpụta igwe na-arụ ọrụ nke ọma yana njiri mara klaasị na ọrụ ọkachamara.
Anyị nwere obi ike na BMT ga-abụ nhọrọ gị kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ onye nrụpụta igwe na-arụ ọrụ nke ọma yana njiri mara klaasị na ọrụ ọkachamara.
Igwe eji arụ ọrụ titanium, Igbe galvanized, Akụkụ Ngwa CNC, High-End mpempe akwụkwọ Metal Parts ngwaahia, Akara akpaghị aka, Omenala igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ,